प्रधानमन्त्री ओलीको मोदीलाई शुभकामना, सन्देशपछि नाकाबन्दी हट्छ हट्दैन?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको ६७ औं गणतन्त्र दिवसको अबसरमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई शु्भकामना सन्देश पठाएका छन् । भोलि भारतले ६७ औं गणतन्त्र दिवस मनाउँदैछ त्यही अबसरमा प्रधानमन्त्री..
बैंकको एटिएमबाट पैसा चोरी गर्ने पक्राउ
इटहरी । सुनसरी जिल्लाको इटहरी बसपार्क क्षेत्रको यातायात मजदुरका रुपमा कार्यरत प्रतीक भनिने उमेश दाहालले यातायातका सेवाग्राहीको झोलामा रहेको एटिएम र पिन कोडसमेतबाट रु ५५ हजार चोरी गरेको खुलासा भएको..
​असमझदारी हटाउँदै नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्नेमा जोड
काठमाडौँ । समान सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र राजनीतिक व्यवस्था भएका छिमेकी नेपाल एवम् भारतबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । भारतको ६७ औँ गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज..
जेलमा रहेका नेपाली फिर्ता ल्याउन तत्काल कानुनी सल्लाहकार राख्न आग्रह
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मलेसियाको विभिन्न जेलमा रहेका नेपाली कामदारलाई सहजरुपमा स्वदेश फिर्ता ल्याउन अविलम्ब कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले केही दिन पहिले मलेसियाको स्थलगत..
​टेलिफोनको घन्टीले काट्नसक्ने कानुन नबनाउन आग्रह
काठमाडौ । ऐनलाई परिपत्र र परिपत्रलाई टेलिफोनको घन्टीले काट्नसक्ने कानुन नबनाउन निजी क्षेत्रले संसदीय समितिलाई सुझाव दिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् अर्थ समितिको आजको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा..
​नेपालको संविधान संशोधनमा भारत सकरात्मक, कहिले खुल्ला त नाकाबन्दी
काठमाण्डौ । मधेस आन्दोलनको माग बमोजिम नेपालको ब्यवस्थापिका संसदले संविधानमा हिजो गरेको पहिलो संशोधनलाई भारतले ‘सम्मान’ गरेको टिप्पणी गरेको छ । भारतीय बिदेश मन्त्रालयले आज बिज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान संशोधनप्रति सकरात्मक..
नेपालको सविधान संसोधनको विषयमा धारणा तय गर्दै नयाँ दिल्ली
काठमाडौ। नेपालको संविधानमा दर्ता गराईएको पहिलो संसोधन विद्येयकलाई सकारात्मक भनेको छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत सोही अनुसार भएको संसोधनमा धारणा तय गर्न आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ । भारतीय विदेशमन्त्रालय साउथ ब्लका अधिकारीहरु..
​बाबुरामको नयाँ शक्तिमा करिश्मादेखि मुमाराम खनालसम्म, आजै केन्द्रीय परिषद् सार्वजनिक हुँदै
काठमाडौं । गत असोज ९ गते घोषणा भएको नयाँ शक्ति निर्माण अभियानले आइतबार प्रारम्भिक केन्द्रीय परिषद् घोषणा गर्दैछ । मयधलयिबमबानेश्वरको अल्फाबिटामा दिउँसो १२ बजे एक कार्यक्रम गरेर उसले केन्द्रीय परिषद् घोषणा..
​पत्नीबाट कसरी पिडित बन्दैछन् पतिहरु? यस्तो छ पत्नीपीडितको बयान
काठमाडौं । माघ विदेशबाट फर्किंदा श्रीमती अन्तै– वैदेशिक रोजगारबाट दीपक मिजार चार महिनाअघि घर फर्किए । खाडीमा पसिना बगाएर कमाएको पैसा उनले नियमित श्रीमतीलाई पठाउँदै आएका थिए । तर, तीन..
नेपालले २३ वर्षपछि अन्तराष्ट्रिय फुटबलको उपाधि जित्यो
काठमाडौं । नेपालले २३ वर्षपछि अन्तराष्ट्रिय फुटबलको उपाधि जितेको छ । शुक्रबार भएको फाइनलमा बहराइनलाई ३(० गोल अन्तरले पराजित गर्दै बङबन्धु कप फुटबलको उपाधि जितेको हो । यो २३ वर्षपछि नेपालले..
​प्रहरी इन्स्पेक्टर बनाई दिन्छु भनी ठगी गर्ने तीन पक्राउ
काठमाडौं । अनुसन्धान निरीक्षक र सहायक निरीक्षकमा जागिर लगाईदिने भनी विज्ञापन समेत गरेको देखाइ सङ्गठितरुपमा सर्वसाधारणलाई लाखौं ठगी गर्ने तीन व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ । गृह मन्त्रालय..
​पशुपति आर्यघाटमा माघ १० देखि विद्युतीय मेसिनबाट शव जलाउने, छिटो र सस्तो
काठमाडौँ । बहुप्रतिक्षित विद्युतीय शवदाह गृह पशुपति आर्यघाटमा आगामी आइतबार ९माघ १० गते० देखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको सो गृहको निर्माण कार्य सम्पन्न..
‘आर्थिक रुपले एकीकृत दक्षिण एसिया बनाउनुपर्छ’
काठमाडौं । विश्वको कुल जनसङ्ख्याको २३ प्रतिशत जनताको बासस्थान दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा गरिबी र अविकासजस्ता साझा समस्याहरुमा एकीकृत प्रयास अपरिहार्य भएको उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रका जानकारहरुले बताएका छन् । विश्वका ५० प्रतिशत गरिब..
​भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बौद्धनाथ चैत्यको १८ करोड रुपैयाको लागत जीर्णोद्धार सुरु
काठमाडौँ । बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले बौद्धनाथ चैत्यको जीर्णोद्धार सुरु गरेको छ । गत वैशाख १२ गते आएको भूकम्प तथा त्यसपछि आएका परकम्पका कारण सो चैत्यमा ठूलो क्षति भई जोखिममा परेपछि..
​अपाङ्गता भएकाका लागि दशवर्षे कार्ययोजना तयार हुँदै
काठमाडौ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनःस्थापना तथा स्वास्थ्य सेवामा उनीहरुको पहुँच अझ सहज र सरल पार्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले दशवर्षे कार्ययोजना तयार गर्न सुरु गरेको छ । नेपालको संविधानअन्तर्गत सामाजिक न्यायको हक,..
​जर्मनी बन्यो विश्वकै उत्कृष्ट मुलुक, विधागत रुपमा अग्रस्थानमा कुन कुन हुन
लन्डन । विश्वकै उत्कृष्ट देश जर्मनी बनेको छ । स्वीटजरल्याण्डको दाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक शिखर सम्मेलनमा जारी गरिएको तथ्यांक अनुसार जर्मनी विश्वकै उत्कृष्ट मुलुक भएको हो । विभिन्न मापदण्डका आधारमा..
​गन्धर्वहरु पुख्र्यौली पेसा छोडी अन्य पेसा अङ्गाल्न बाध्य
दाङ । परापूर्वकालदेखि गाउँगाउँमा पुगी सारङ्गी बजाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका यहाँका गन्धर्वहरुको पुख्र्यौली पेसा हाल आएर ओझेलमा परेको छ । अहिले पुख्र्यौली पेसा सङ्कटमा परेपछि उनीहरु अन्य पेसा अङ्गालेर जीवनयापन गर्न..
​चार महिला बेचिनबाट जोगिए, चार आरोपी पक्राउ
चितवन । प्रहरीको सक्रियताका कारण चार महिला बेचिनबाट जोगिएका छन् । एक गिरोहले बेच्न लैजाँदै गर्दा उनीहरुलाई चितवनबाट उद्धार गरिएको र बेचबिखनमा संलग्न चारजनालाई पक्राउ गरेको चितवन प्रहरीले बिहीबार जानकारी..
मध्यरातमा ४.६ रेक्टरको पराकम्पको झड्का
काठमाडौँ, । धादिङ र नुवाकोटको सीमाक्षेत्र साल्मेनजिकै केन्द्र बनाएर मध्यरातमा ४।६ रिक्टर स्केलको पराकम्प गएको छ । बिहान १ बजेर ७ मिनेट जाँदा ४.६ रिक्टर स्केलको पराकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन..
काठमाडौं । बेलायतमा पूर्वरुसी जासुस अलेक्जेन्डर लित्भिनेन्कोको हत्यामा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको संलग्नता हुन सक्ने रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । लित्भिनेन्कोको हत्यामा सम्भवतः रुसी राष्ट्रपति पुटिनको स्वीकृति रहेको बेलायतस्थित सार्वजनिक छानबिन..
​लुम्बिनी विकास कोषमा भएका अनियमिततामाथि छानबिन गर्न निर्देशन
काठमाडौ । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिलले लुम्बिनी विकास कोषमा भइरहेको अनियमितता र अनुचित कार्यको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ..
​होटलले देहव्यापार चलाउन थालेपछि विकृति रोक्न महिलाको गस्ती
चन्द्रकला भण्डारी झापा । झापाको काँकडभिट्टामा स्थानीय महिलाले होटल लजमा हुने विकृति रोक्न सामूहिक गस्ती सञ्चालन गरेका छन् । महिलाको यस्तो सक्रियताले होटलमा हुने देहव्यापार लगायतका विकृति बन्द भएको छ । पूर्वी..
​रंगेलीमा झडपमा परी दुई महिनासहित तीन जनाको मृत्यु
अपडेट विराटनगर । केही दिनदेखि तनावगूस्त मोरङको रंगेलीमा बिहीबार हिंसात्मक झडप भएको छ । झडपमा परी दुई महिनासहित तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने थुप्रै घाइते भएका छन् । एमालेसम्वद्ध युवा संघको..
​सुनको जलप लगाएर ठगी गर्ने चारजना सार्वजनिक
बनेपा । सुनको जलप लगाएर रु ३२ लाख ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका चारजनालाई प्रहरीले आज धुलिखेलमा सार्वजनिक गरेको छ । उनीहरुसँगबाट नगद रु दुई लाख ५४ हजार ६७०, मोबाइल तीन..
‘राष्ट्रिय प्राणी उद्यान’ को सीमाङ्कन निर्धारण गरिँदै, सदर चिडियाखानाका ठूला प्राणीलाई उद्यानमा सारिने
भीष्मराज ओझा काठमाडौं । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले खुला चिडियाखानाको अवधारणाअनुसार भक्तपुरको सूर्यबिनायकमा स्थापना गर्न लागेको ‘राष्ट्रिय प्राणी उद्यान’को सीमाङ्कन निर्धारण गर्ने कार्य सुरु गरेको छ । विसं २०७१ माघ २९ गतेको..
​मध्यपुर नगरपालिकाद्वारा एक्काइस करोड बजेट सार्वजनिक
भक्तपुर । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले आब २०७३/०७४ का लागि कुल रु २१ करोड २१ लाख २१ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आज नगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भूपेन्द्र सापकोटाले..
​सामूहिक बलात्कारपछि युवतीको हत्या
रुकुम । रुकुम खोलागाउँकी एक युवतीको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको छ । घर नजिकैको जङ्गलमा दाउरा लिन गएकी खोलागाँउ–५ सर्केनाकी १६ वर्षकी युवतीको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । मङ्गलबार अपराह्न..
​८ करोड पर्ने जग्गाको नक्कली लगत तयार गरी जालसाजी गर्नेहरुमाथि कारबाही
लक्ष्मी गारु भक्तपुर । मध्यपुर थिमि नगरपालिका–१५, साविक दिव्यश्वरी गाविस–३, कुशल भैरबथलीको जग्गाको किर्ते लगत तयार गरी जालसाजी गर्ने खरिदार देवराज केसी धरौटीमा रिहा भएका छन् । मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा रहेको..
​गुल्मीमा एकैघरका दुई बालकको रहस्यमय मृत्यु, आशङ्कामा सौतेनी आमा पक्राउ
गुल्मी । गुल्मीको हाडहाडे गाविसमा एकै घरका दुई बालकको रहस्यमय मृत्यु भएको छ । यसरी मृत्यु हुनेमा हाडहाडे गाविस–९ स्थित नरेन्द्र पुनका ५ वर्षीय र ७ वर्षीय छोरा मनिष पुन र..
​स्विटजरल्यान्डद्वारा रु तीन अर्ब अनुदान सहयोग
काठमाडौँ । स्विटजरल्यान्ड सरकारले नेपाललाई करिब रु तीन अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपालका २५ जिल्लामा शिक्षा, दिगो तथा प्रोत्साहनमुखी रोजगारीका लागि सीप अभिवृद्धि परियोजना तथा नेपाल कृषि..
Results 1994: You are at page 58 of 67